बिवाहको पहिलो सुहागरात पछि बेहुली बेहोस्, दुलाहा फरार…. – Khabar Art Nepal
बिवाहको पहिलो सुहागरात पछि बेहुली बेहोस्, दुलाहा फरार….
By Pasang Tamang	 On २६ चैत्र २०७५, मंगलवार ११:४०
एजेन्सी । विवाह पछि सामान्यतया मानिसले अर्को जीवनको सुरुवात भएको ब्याख्या गर्छन । तर, भारतको उत्तर प्रदेशको बागपतमा जिल्लामा भने विवाह पछि अनौंठो हर्कत देख्नमा आएका खबरहरु बाहिर आइरहेका छन् । बागपत जिल्लामा एक जोडीले गाउँमैं विवाह गरेका थिए ।
त्यसपछि दाजुले सुहागरातका दिन उनका पतिले नै यो सब गरेको किटानी जाहेरी दिएका छन् । यद्यपि यो सब उनले किन गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन । पति फरार छन् र पत्नी अहिलेसम्म बेहोस छिन् जसका कारण त्यो रात के भएको थियो भन्ने बताउने कोही छैन । घटनाको बारेमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेसम्म बेहोस ती युवत्तिको अवस्था सामान्य अवस्थामा आएको छैन । यत्ता प्रहरीले फरार पतिको खोजी गरिरहेको जनाएको छ ।
रातारात भाइरल बन्यो छोरा अभिषेककाे नाममा अमिताभ बच्चनले गरेको ट्वीट
डोटीमा ९८० जना एचआइभी सङ्क्रमित